Dhamma tamarta: waa maxay, maxay qabataa iyo maxay mashaariicda ay leedahay | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
Tamarta qorraxda waxaa si isa soo taraysa u xayeysiiya shirkado iyo mashruucyo isku dayaya in ay tamartan ka dhigaan wax horumarsan. Mid ka mid ah shirkadaha sharadka tamarta cadceedda waa Dhamma tamarta. Kooxda Dhamma Energy waxa ay horumarisaa, dhistaa oo ka hawlgashaa xarumaha tamarta cadceedda.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa taariikhda Dhamma tamarta, mashaariicda ugu muhiimsan iyo sida ay u shaqeyso.
2 Mashaariicda tamarta Dhamma
3 Qaab dhismeedka iyo maalgelinta tamarta Dhamma
4 Qaybinta Hydrogen ee Spain
5 Dhamma tamarta iyo dhismaheeda
Hawlaha Dhamma Energy ee Faransiiska iyo Spain waxaa la wareegay Oktoobar 2021 Eni gas e luce, oo hoos timaada 100% Eni SpA. Dhamma Energy waxay hadda ku leedahay 120 MWp warshad koronto qoraxda gudaha Faransiiska.
Dhamma Energy waxa ay ka shaqo bilowday France iyo Spain in ka badan toban sano ka hor, halkaas oo ay ka samaysay mashruucii ugu horeeyay ee qoraxda. Ka dib, Dhamma Energy waxay kordhisay hawlaheeda Faransiiska, halkaas oo ay ka dhistay beertii ugu horreysay ee qoraxda.
Sannadkii 2013, Dhamma Energy waxa ay Mexico ka furtay shirkad hoos timaada, taas oo samaysay warshad koronto oo cadceeddu dhan tahay 470 MWp, haddana haysata 2 GWp. Dhanka kale, kooxdu waxay ka shaqaynaysaa mashruucii ugu horreeyay ee sawir-qaadista ee Afrika, 2 MWp beerta qorraxda ee Mauritius, oo la furay 2015.
Ilaa hadda, Dhamma Energy waxay dhamaystirtay horumarinta 650 MW ee dhirta tamarta sawir-qaadista, oo ku taal inta badan Mexico, France iyo Afrika. Dhamma Energy waxay hadda ku leedahay Meksiko dhuumo 2 GWp ah. Kooxda Dhamma Energy waxay ka kooban yihiin maareeyayaasha mashruuca, injineerada iyo khabiirada farsamada ee qaybta sawir-qaadista.
Mashaariicda tamarta Dhamma
Sanadihii la soo dhaafay, waayo-aragnimada ay heleen, waxay noqdeen hoggaamiye madax-bannaan oo horumarinta dhirta tamarta tamarta iyo tamarta qorraxda. Sida horumarinta, dhisayaasha, hawl-wadeennada iyo maalgashadayaasha dhirta sawir-qaadista, waxay daboolaan dhammaan wareegga nolosha ee mashruuca: laga bilaabo raadinta dhulka ilaa dayactirka iyo maareynta beerta sawir-qaadista.
Kooxdu waxay dabooshaa dhammaan heerarka horumarinta mashruuca PV cadceedda, oo ay ku jiraan daraasado macquul ah, sahan muuqaaleed, daraasaadka deegaanka, qiimeynta goobta, fikradaha rakibaadda, qiimeynta farsamada, falanqaynta siyaasadda iyo sharciyeynta, suurtagalnimada maaliyadeed, aasaasida iibsashada awoodda (PPA).
Dhamma Energy waxay la shaqaysaa alaab-qeybiyeyaasha caalamiga ah ee ugu muhiimsan (Modules photovoltaic, rovers, hababka kaydinta). Mid ka mid ah dhinacyada dhaqdhaqaaqa Dhamma Energy waa maareynta dhismaha mashaariicda sawir-qaadista. Dhamma Energy waxay sidoo kale la socotaa la-hawlgalayaasheeda maalgashiga ilaa inta laga gaarayo marxaladda bilowga mashruuca.
La shaqee khabiiro iyo rakibayaal khibrad dheer u leh goobta. Dhamma Energy waxa ay ku guulaysatey in ay horumariso oo ay dhisto saqafyo iyo mashruucyo qoraxda ah oo hadda socda.
Qaab dhismeedka iyo maalgelinta tamarta Dhamma
Mid ka mid ah wejiyada muhiimka ah ee mashruuca waa qaabaynta iyo maalgelinta. Shirkadan tamarta qoraxda ah, waxay khibrad, aqoon iyo xirfad u leeyihiin sidii ay u sugi lahaayeen maalgelinta una sugi lahaayeen maalgelinta guusha leh ee xarumaha dhexe iyo kuwa waaweyn ee tamarta cadceedda iyadoo la raacayo xeerar kala duwan. Khibraddiisu waxay dabooshaa maalgelinta sinnaanta iyo sidoo kale heshiisyada deynta muddada-dheer ee bangiyada ganacsiga iyo hay'adaha caalamiga ah.
Waxay ku lug leeyihiin wareegga nolosha oo dhan ee mashruuca waxayna kormeeraan bilawga Warshada tamarta cadceedda marka ay gaadhaan heerka ganacsi ayay horumariyaan oo ay fuliyaan mashaariicdan. Wax soo saarka tamarta qoraxda waa qayb ka mid ah ganacsiga.
Waxay hadda leeyihiin warshado koronto oo cadceedda kala duwan oo shaqeynaya, oo ay ku jiraan dhirta dhexdhexaadka ah iyo kuwa waaweyn ee dhulka lagu dhejiyo, iyo sidoo kale dhirta saqafka sare, oo ku yaal inta badan Faransiiska.
Qaybinta Hydrogen ee Spain
Qaybinta hydrogen-ka cagaaran ee mashaariicda Yurub waxay ka bilaabmi doontaa Spain iyada oo ay ka qayb qaadanayaan Enagás, Naturgy iyo Dhamma Energy. Mashruuca HyDeal Ambition wuxuu higsanayaa inuu horumariyo silsilad qaybinta Yurubta ee hydrogen-ka cagaaran qiimo tartan ah gudaha Spain, halkaas oo korontadu ay billaaban doonto sanadka soo socda, iyadoo la hiigsanayo 10 megawatts sannadkii.
Asalka isha tamarta la cusboonaysiin karo waa soo saarista hydrogen-ka cagaaran ee loo maro korantada cadceedda, iyada oo loo marayo qiimaha tartanka lagu gaari karo barnaamijka, kaas oo qaadi doona talaabooyinkiisa ugu horeeya sanadka 2022 ujeedadiisuna tahay in la gaadho 85 GW ee awooda qoraxda iyo 67 GW ee tamarta qoraxda. Watts ee korantada korantada ee 2030.
Tani waxay ka dhigan tahay 3,6 milyan oo tan oo hydrogen cagaaran ah sannadkii, oo u dhiganta laba bilood oo saliid ah oo Spain ah, taas oo loo qaybin doono kaydinta gaaska dabiiciga ah iyo shabakadaha gaadiidka ee shirkadaha ka qayb qaadanaya hindisaha. Qiimaha macmiilka waxa lagu qiyaasaa 1,5 EUR/kg, kaas oo u dhigma qiimaha hadda ee shidaalka fosil laakiin, beddelkeeda, ma dhaliso wasakh.
Marka lagu daro saddexda shirkadood ee Isbaanishka Enegás, Naturgy iyo Dhamma Energy, shirkado kale oo waaweyn oo ka socda qaybaha kale ee Yurub ayaa sidoo kale ka qayb qaadanaya, sida Falck Renewables (Italy), Gazel Energie (France), GTTGaz (France), HDF Energie (France). , Hydrogen de France , McPhy Energy (France), OGE (Jarmalka), Qair (France), Snam (Italy), Teréga (France), Vinci Construction (France)… ilaa 30 shirkadood oo ka qayb qaadanaya. Kuwani waa shirkado ka kala socda qaybo kala duwan sida horumarinta qoraxda, soo saarista qalabka korantada, injineernimada, iyo sidoo kale maalgelinta kaabayaasha iyo la-taliyayaasha.
Dhamma tamarta iyo dhismaheeda
Sannadkan 2021 ee bisha May, Dhamma tamarta ayaa codsatay oggolaansho ku rakibida korantada warshad koronto sare leh oo loo yaqaan "Cerrillares I photovoltaic solar plant". Horumarinta mashruucan oo u dhexeeya dawladaha hoose ee Jumilla iyo Yecla. waxay ka dhigan tahay maalgelin lagu qiyaasay 30 milyan oo Yuuro, kuwaas oo 28 milyan oo Yuuro u dhigma rakibaadda korantada yar ee korontada ee warshadda qorraxda ee dhulka, oo si siman u raacda hal dhidib.
Dhanka kale, 1 milyan oo Yuuro ayaa lagu maalgelin doonaa xadhkaha gudbinta dibadda si looga saaro tamarta la soo saaray (dhererka 12.617 mitir) iyo 742.000 euro ee saldhigyada. Beerta cadceedda ayaa qaadan doonta wadar dhan 95 hektar, marka la shaqeeyo waxay dhalin doontaa 97,5 GWh oo koronto ah sanadkii. Wax soo saarkan ayaa u dhigma isticmaalka ilaa 30.000 qoys.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto tamarta Dhamma iyo mashaariicdeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta Qoraxda Photovoltaic » tamarta dharma
Sidee guriga looga ilaaliyaa qabowga jiilaalka?